I-Best Orchestral yeVidiyo yeVidiyo yeVidiyo
Imboniso yezemidlalo yehlabathi jikelele yayineentengiso ezidlula i-$ 90 yezigidigidi ngo-2015. Ngentuthuko kwezobuchwepheshe ezenzeka rhoqo njengoko ilanga liphuma, imidlalo yevidiyo inekhono ekhethekileyo lokutsala abasebenzisi abatsha kunye nokugcina abantu abadala. Ukudlala umdlalo olungeleleneyo, imigca yeengcambu ezithandekayo, iikhompyutheni ezibonakalayo ezibonakalayo, kunye neengoma ezithandwayo kunye, ukuba kungengcono kunabalingisi bomculo be- cinematic kunye nabadala , banike abadlali amava amaninzi. Ekubeni le website ye-classical music, siya kubambelela kumculo. Ngezantsi apha i-video yam ephakanyisiweyo yemidlalo yemidlalo yeengqungquthela kunye neengoma ezivakalayo ezenza umxholo omkhulu kwiqoqo lakho lomculo.
Ekhutshwe ngoNovemba, 2011, i-London Symphony Orchestra igxininise italente ephawulekayo kwimidlalo yemidlalo yevidiyo. Ukusuka kwiiNgqungquthela eziThuthileyo kwi- Super Mario Bros. umxholo, uya kuphulaphula ingqungquthela iinguqulelo zee-orchestral zamanye amashishini athandwayo kunye nomculo ozithandayo wevidiyo we-soundtrack njengeThe Legend of Zelda: I-Suite, i-Elder Scrolls: Ukuthotywa, I-Call of Duty 4: Umxholo oyiNtloko, iWorld Warcraft: Ixesha leMfazwe, isihloko seTetris , kwakunye neNate Theme evela kwi- Uncharted 2.
Ukhuthazwe Uluhlu lweeNcwadi
Igosa likaZelda: I-Suite , (laphula kwi-YouTube)
Final Fantasy VII: I-Liberi Fatali (mamela kwi-YouTube)
Uncharted: Drake Theme (mamela kwi-YouTube)
Esi sikhulu sokuhlawula isandi safakwa kwisithuba sokukhutshwa komdlalo esincinci. Ngamaqaku abhalwe ngumqambi waseSpain u-Óscar Araujo, i-orchestra engama-120 yayisetyenziselwa ukudala i- Castlevania enamandla . I-Araujo iphumelele ibhaso le-International Film Music Critics Association kwi-Best Score Score yeMidlalo yeVidiyo okanye iMedia Media phakathi no-2011.
I-Belmont's Theme (phulaphula kwi-YouTube)
Amanzi e-Agharta (laphula kwi-YouTube)
Ukugqitywa kokugqibela (laphula kwi-YouTube)
Ukubandakanywa kunye neMidlalo yeNyaka yoMnyaka, i-soundtrack kwi- Civilization V ayikho nto engaphantsi kwebalaseleyo. Amanqaku acamngca neengqiqo nguMichael Curran noGeoff Knorr babhala ngokugqithiseleyo emva kokufunda ezininzi iinkcubeko zehlabathi ezibandakanyiweyo kumdlalo. UCrusran noKnorr baqulunqa ngobuchule kunye nemixholo yenkcubeko kunye neengqungquthela kwiimpawu zabo zangaphambili njengeendlela zokugubungela umdlali njengoko edlala njengoAlexander Omkhulu, uGeorge Washington, okanye uGhandi. Kulo mdlalo, kodwa kungabandakanywa kwisandi, kusebenza kunye nabaqambi beklasi abafana neDvorak , Copeland, kunye nokunye.
IWashington Peace Theme (mamela kwi-YouTube)
Bismark Peace Theme (mamela kwi-YouTube)
Elizabeth Elizabeth Theme (mamela kwi-YouTube)
Ngaphezulu kwezitolimende ezili-12, Final Fantasy, inomsebenzi omkhulu. Kuye kunye nemigca yamabali amaninzi kwaye umdlalo wezemidlalo uninzi lomculo omnandi. Iihlabathi ezikude I & II: Umculo weFantasy Final iququzelelwe ngeenguqulelo zezinye iziqulatho ezithandwa kakhulu. Ngama-26 amathrekhi amaninzi phakathi kwama-albhamu amabini, le ngqokelela ayinakrokra phezulu kwaye ishiya abaninzi abalandeli bafuna ngaphezulu, kuquka nam!
Elinye iWinged Angel (laphula kwi-YouTube)
Terra's Theme (mamela kwi-YouTube)
Umntu onomshini womshini (mamela kwi-YouTube)
Le disk ezine isethi, efumaneka kwingoma eqondileyo, ibonisa umculo ophumeleleyo wongoma we -Elder Scrolls V: Skyrim. I-Skyrim yenye yeemidlalo ezinkulu kakhulu ezikhishwe kwiminyaka embalwa edlulileyo kunye neplayplay kalula kwiiyure eziliqela. Ngalo lonke ixesha lexesha lemidlalo, kufuneka kubekho amanqaku anqabileyo-kwaye kukho.
Far Horizons (mamela kwi-YouTube)
I-Frostfall (phulaphula kwi-YouTube)
Dragonborn (mamela kwi-YouTube)
Okunconywe ngakumbi kweMidlalo yeVideo yeeNgqangi zokuQala kunye nezandi
Olu luhlu luyaqhubeka malunga neentsuku, kodwa ukugcina izinto zifutshane kwaye zincinci, ndiye ndancinci ngakumbi umdlalo wam video oyintandokazi yangaphambili kwiimpawu eziyingqayizivele zomculo endiyakholelwa ukuba zifanele ukongeza kwiidlali zakho zokudlalwayo.
I-Dragon Age Inquition Inkundla ye- Dragon Age Inquisition (mamela kwi-YouTube)
I-Hunter's Patch esuka kwi -Witcher 3: U-Wild Hunt (mamela kwi-YouTube)
I-Alabaster ukusuka kwi- Infinite Undiscovery (mamela kwi-YouTube)
I-Luxerion kwi- Lightning Returns: Final Fantasy XIII (phulaphula kwi-YouTube)
Ikugqibela Kwethu ukusuka kwi -Last of Us (phulaphula kwi-YouTube)
Ukuthabathela kwi-Ski ukusuka kwi- Ni No Kuni: Intukuthelo ye-Witch White (mamela kwi-YouTube)
Ukuqala kokuphela kweNkcazo yokugqibela ye-Type-0 HD (laphula kwi-YouTube)
I-Nascence yohambo (mamela kwi-YouTube)
Iimifanekiso ze-10 ze-Classical Music Christmas
I-Top 10 yeBaroque Music
Intshayelelo yeJazz Music
URahula: Unyana kaBuddha